Iindaba-Ezintsha zeMveliso kuBuso be-COVID-19
I-COVID-19 Ngelixa loyikekayo, amaxesha obunzima kule minyaka ikwakhuthaze ezinye zezona zinto zibalulekileyo zembali ezisasetyenziswayo namhlanje. Ukusuka kwi-ambulensi eyenziwe ngexesha lamaXesha Aphakathi ukunceda oogqirha ukuba bafike kwaye bathuthe abaguli ngokukhawuleza, benze iteyiphu ngexesha le-WWII bencedisa amajoni ukulungisa izixhobo kwipinki, kunye nomsebenzi kaIsaac Newton kwibala lokuqala kunye nomxhuzulane ngelixa 'besebenza ekhaya' ngexesha leGreat Isibetho saseLondon, ubhubhane wesizwe kunye nowelizwe jikelele ibe sisiseko sezisombululo ezintsha nezobuchule kwiingxaki zelo xesha. Ngokuqhubela phambili kweendlela zokwenza ucoceko, ezinye iindlela zemaski, kunye nokubulawa okupheleleyo kwezixhobo ukukugcina ungachukumisi iindawo ezahlukeneyo, ubhubhane we coronavirus wangoku ungqineke wahlukile.
Enye yezona zixhobo zibalulekileyo eziphumayo kubhubhane wangoku ikwahlukeneyo yokugubungela ubuso. Mhlawumbi sikhuthazwe kukunqongophala kokulahla kunye neemaski ze-N95 ezinconyelweyo kumanqanaba okuqala, siye sabona ispike kubanikezeli abazenzele kunye nezinye izinto ezinokuhlanjululwa nezinokuphinda zisebenze. Uphononongo lwamva nje luye lwabonisa iimaski zelaphu ezenziwe ekhaya, ezomeleleyo ukuze zisebenze ngakumbi kuneebhanana okanye iimaski zesimbo sekhowuni (njenge-N95) enamaconsi okhohlela ahamba ii-intshi ezi-2.5 kwii-intshi ezigqunyiweyo, xa kuthelekiswa neenyawo ezintathu, kunye nee-intshi ezi-8, ngokulandelelana.
Ngokukhetha ukwenza izinto zokuzogquma ubuso ngelaphu elenziweyo, i-Soffio eyakhiwe ngeplastikhi ehlaziyiweyo, kunye nezinto ezininzi ezinokuphinda zisetyenziswe zingeniswe, ezi ndlela zinokuphinda zenziwe emva kobhubhane zilungele ukuba nefuthe kwindalo esingqongileyo kunye nefuthe kuhluzo lwexa elizayo Abaqulunqi beza nendalo ukuze bancede abathengi babo, ubukhulu becala imivalo kunye neeresityu, becela izisombululo zoyilo kunye nezisebenzayo zokunceda amashishini ukuba avule kwakhona.
Nokuba zintsha, iindlela ezinobungozi kokusingqongileyo zokuvelisa iimveliso, izixhobo ezongeziweyo zokugcina sinxibelelene, okanye itekhnoloji entsha yethekhnoloji enjenge-NASA's PULSE pendant eshukuma xa isandla sakho sisondela ebusweni bakho, ubhubhane we-coronavirus ukhuthaze ezinye zezimvo zokuyila nezintsha. Kuya kuba lunomdla ukubukela ezi zinto ziphucukileyo kwaye zibone ezinokuthi ziphuhle zibe kwi-ambulensi okanye iteyiphu yexesha elizayo.
Iliso kwi-Innovation yimbonakalo yenyanga kwitekhnoloji entsha, iimveliso, kunye neendlela.